အွန်လိုင်းပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ယနေ့ခေတ်နှစ်ဆသောအတွေးများ (Sunday Times, UK) - သင်၏ ဦး နှောက်အပေါ် porn
ဘယ်လိုအခမဲ့အွန်လိုင်း porn ဒီနေ့ရဲ့ twentysomethings (တနင်္ဂနွေ Times သတင်းစာ, ဗြိတိန်) ၏စိတ်ထဲတွင် warped
မကြာခဏလွန်ကဲ - ယနေ့ twentysomethings porn အလွယ်တကူအခမဲ့ရှိရာတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျထကြီးထွားဖို့ပထမဦးဆုံးလူတွေရှိကြ၏။ ဂါဗြေလ Pogrund, 23 ကြောင့်လူငယ်များပုံစံသွင်းသွင်းပုံကိုဖော်ပြထားတယ်
တဦးတည်းလူကြိုက်များက်ဘ်ဆိုက်ယခုနှစ်အစောပိုင်းက၎င်း၏ 10th မွေးနေ့သို့ရောက်ရှိသည့်အခါကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ်သို့ထောင်ပေါင်းများစွာဆိုက်အတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းသူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအဘယ်သို့ဆိုမှ Twitter ကိုမှယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှု creepy လွမ်းဆွတ်မှုတွေနဲ့ tinged ခဲ့ကြသည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးဇော်လင်းက: "။ အစဉ်အမြဲတံခါးသော့ခတ်ရန်" "အလွန်မြန် PC ကိုပိတ်ပစ်ရန်ကဘယ်လို," အခြားကဆိုသည်။ တစ်ယောက်သောအနည်းငယ်ပိုလင်းလင်း, အခြားဆိုက် "လိင်အကြောင်းကိုငါသိတိုင်းနည်းနည်းအရာ" ကိုသွန်သင်လေ၏ပြောသည်စဉ် "ဒါဟာကွဲပြားခြားနားဖြစ် OK ကိုရဲ့" ဝန်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါ $ 100bn ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ porn စက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်နှလုံးမှာထိုင်နှင့်ဘီဘီစီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်များထက်ပိုပြီးဧည့်သည်များရှိကြောင်းကုမ္ပဏီ, CNN နဲ့: ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက် site ကို Pornhub ခဲ့သည် Amazon.co.uk ပေါင်းစပ်။ ၎င်း၏မွေးနေ့ငါ၏အမျိုးဆက်ကျော်သုတ်သင်တော်မူကြောင်းကို smut ၏လှိုင်းအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အချိန်မီယခုအချိန်တွင်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
ငါ 1994 တှငျမှေးဖှားခဲ့တဲ့အခါ, LA ကအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို၏လက်တဆုပ်စာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အများစုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်ဦးကအများအားဖြင့်အထီးဖောက်သည်လက်ဆော့လိင်ဆိုင်များအနေဖြင့် VHS တိပ်ခွေမှာသူတို့ကိုဝယ်လွတ်လပ်သောဗီဒီယိုကစတိုးဆိုင်မှသူတို့ကိုငှားသို့မဟုတ်အိမ်မှာသို့မဟုတ်ဟိုတယ်အခန်း pay-per-အမြင်လိုင်းများပေါ်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်။ ထိုအခါအင်တာနက်ဖြစ်ပျက် - နှင့်ညစ်ညမ်းခရီးဆောင်ထို့နောက်နေရာအနှံ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယနေ့ Pornhub သည်နှင့်အညီ, က porn စားသုံးသူအများစုများအတွက်အကောင့်လူငယ်လူကြီးများသည်။ အနှစ်တစ်ထောင် - လူတွေ 18 မှအသက် 34 - ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့သုံးစွဲသူ 60% တက်ပါစေ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြည့်ရှုအားပေးခန့်မှန်းခြေ 45bn ဗီဒီယိုများအတွက်စာရင်းကိုင် - 23% အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြဘယ်သူကိုများ - ဒါကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 55m ကလူပါပဲ။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးအ Pornhub ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရနားလည်လာတယ် - နှင့်ငါ့မျိုးဆက်အပေါ်အလှည့်၌, porn ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို - တစ်ဦးပြောင်လှောင်အရက်ဆိုင်ပဟေဠိ၌ငါ့မိတ်ဆွေတစ်၏အိမ်တော်မှာအသက် 16 ။ ပိုrisquéကျည်တက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအမျိုးအစားအမည်ကိုဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ quizmaster ဟာပတ်ပတ်လည်ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကရှက်ရယ်မောခြင်းထဲမှာပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ သို့သျောလညျး, ဖြည်းဖြည်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်အစီအဖွဲ့ 30 အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. အမည်ကို၏။ "ဆယ်ကျော်သက်", "လိင်တူချစ်သူ", "ebony", "မျိုးကွဲ", "လိင်တူချစ်သူ" ဒါတွင် "စပျစ်သီး", "ဥရောပ", "အပျော်တမ်း" ပါ။
ပိုငါသည် သာ. ငါကဖြစ်, ငါ့အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအပေါ်အဘယ်အရာကိုထူးခြားတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်ယူဆပါဘူး, နောက်ပိုင်းကစဉ်းစားပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အပျိုကညာ - - ကြီးကျယ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, ဦးစားပေးများနှင့်ကောက်သောတစ် cornucopia ရွတ်ဆိုဤတွင် 20 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို pimply ဆယ်ကျော်သက်ခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့ seared ခဲ့ရုံ site ရဲ့ nomenclature မဟုတ်ပါဘူး။ သောနေ့၌ရှိသူတစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ်ခိုင်မာသွား: "ကြှနျုပျတို့လညျး, အညစ်ညမ်းကြယ်ပွများ၏အမည်များအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူး။ ကျနော်တို့ဘက်မှာပေါ်လာကြောင်းကြော်ငြာသိတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နှစ်ပေါင်း porn ကိုဆင်း guzzling ခဲ့င်။ "
ကတည်ရှိပါက၏ညစ်ညမ်းရှိပါတယ်။ '' မငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားခြင်းတိုးတက်မှုနှုန်း 'နဲ့' Boris Johnson က '' မကြာသေးမီကထိပ်တန်း porn ရှာဖွေမှုများကိုအကြားအဆင့်ရှိသည်ဟု
အဆိုပါပဟေဠိကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘများနှင့်မတူဘဲ, ငါ့မျိုးဆက်တစ်ချက်ချင်းနှင့်အပြတ်အသတ် porn-ပြည့်နှက်, porn-စာတတ်မြောက်, porn နှင့်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ပါကမ်ဘာပျေါတှငျထစိုက်ပျိုးခဲ့သည့်အချက်ကိုမှသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ "ကတည်ရှိခဲ့လျှင် porn ရှိပါတယ်: - အင်တာနက်ဒါခေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတဦး - ကဤသို့ဆိုရာအစောပိုင်း Noughties အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခြင်း (? ဒါမှမဟုတ်ဆိုးဖြစ်သင့်), ကြှနျုပျတို့သညျ" နည်းဥပဒေ 34 "မွေးထုတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ကြီးပြင်းခဲ့ ဒါကြောင့်ပါ။ "ဟုပြောသည်ကိုသင်တက်အိပ်မက်မက်နိုင်ပါတယ်ကိုမဆိုစိတ်ကူးအရာပြီးသားတစ်နေရာရာမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း form မှာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းနေဆဲသက်ဆိုင် - အားလုံးအတိတ်နှစ်နှစ်ကျော် Pornhub အပေါ်တကမ္ဘာလုံးထိပ်ရှာဖွေမှုများကိုအကြားအဆင့်, "လူသတ်သမားဆပ်ကပ်လူပြက်" နှင့် "Boris Johnson က" "တိုးတက်မှုနှုန်းမငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားခြင်း" ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာက Google နှင့်အတူစပ်စုဆယ်ကျော်သက်အမျှကျွန်တော်တို့ဟာစဉ်းစားနိုင်ဘာမှကိုရှာနိုင်ဘူး။ ထိုမျှမကအများကြီး - မရတောင်မှအများဆုံးညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာများ - ကျွန်တော်တို့ကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။
အမှတ်ရစရာ, 14 နှစ်ခုဘရာဇီးညစ်ညမ်းမင်းသမီးနှင့်လူ့မစင်တစ်ခွက်ကို featured သောငါ၏ကြောငျးတို့တှငျအ2မိန်းကလေးများ 1 ဖလားပျံ့နှံ့လို့ချေါတဲ့လနျ့စရာအလှနျညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏စကားလုံးအသက်။ ရက်သတ္တပတ်ငါတို့သည် retching နှင့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဝမ်းမြောက်နှင့်အတူ sniggering ကြောင့်စောင့်ကြည့်ကျောင်းတွင် PC များန်းကျင်နေခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအသေးစိတျနှမြောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်က featured ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်လာခဲ့သည် - အခြေအနေတွင်သို့မဟုတ်မိတ်ဆက်စကားဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ - ထို hit Channel ကို 2009 ဟာသစီးရီးအဆိုပါ Inbetweeners တစ်4ဇာတ်လမ်းတွဲ၌တည်၏။ အဆိုပါဇာတ်ကောင်ဂျေးမှတ်ချက်များသည်သူ၏သစ်ကို laptop တစ်လုံးပေါ်ဗီဒီယိုနှင့်သူ့မိတ်ဆွေလိမ့်မည်ကစား: "ဒါကကြောင်းကိုယ်ရောစိတ်ပါဖြစ်ချောကလက်ရဲ့အစစ်အမှန်မဖွစျနိုငျ!"
တစ်ဦးကလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့ကလစ်တုံ့ပြန်ခြောကျခြားဖွစျပွီး retching ရိုက်ကူးလူများဖြစ်သောထောင်ပေါင်းများစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ George Clooney sportingly Esquire နှင့်အင်တာဗျူးတွင် (သူသတင်းများအရအခန်း, gagging ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်) ကာလအတွင်းကစောင့်ကြည့်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ Kermit တစ်ဦးတရားမဝင်ဗီဒီယိုဖားရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမြင်များသန်းပေါင်းများစွာစပါးကိုရိတ်။
porn, ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးယခုခေတ်ပြိုင်လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ interwoven ခဲ့သည်။ အစွန်းရောက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကျနော်တို့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ခန်းမှာငါတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတစ်ဦးတည်းကစောင့်ကြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သည်ပြုံးရယ်ထိုသို့စောင့်ကြည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးအတှကျ watched ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤပစ္စည်းအတွက် marinated အဖြစ်နှင့်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှု porn သည်ငါတို့အဘို့ဆိုးရွားခဲ့တာရှိမရှိကျော်ဝေးကွာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူကမ်ဘာပျေါတှငျဟုန်းဟုန်းမြည်ကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်ဝေးတာခဲ့သလဲ ဒါကြောင့်တစ်ဖွဲ့လုံးမျိုးဆက်များအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်ဖျက်ဆီးခဲ့သလဲ
ဧည့်သည်များမှ၏ Pornhub.com အနှစ်တစ်ထောင်များမှာ - 18 မှ 34 အသက်ကလူ
ဗြိတိန် 11- ၏ရန် 16 နှစ်အရွယ်သူတို့အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမြင်ကြပြီဟုပြော
ယောက်ျားလေးများ၏ညစ်ညမ်းမိန်းကလေးများ 39% (အားလုံးစာရင်းဇယားများအတွက်ရင်းမြစ် NSPCC / Middlesex University မှ 2016) နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိင်တစ်ဦးလက်တွေ့ကျကျပုံဖော်တင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်
သူများသည်ဆွေးနွေးမှုများကျွန်တော်တို့ကိုဆီလျှော်သလိုခံစားရတယ်။ သူတို့ကကျိန်းသေခြုံငုံလမ်းကြောင်းသစ်နှောင့်အယှက်မပေးနိုင်: ငါတို့သည်အဟောင်းတွေတယ်အဖြစ်, porn - ကောင်းမွန်သော, ဆိုးနှင့်ရုပ်ဆိုး - ပိုမြန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပိုမိုလွတ်လပ်သောနှင့်ပိုပြီးလက်လှမ်း။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသဲလွန်စမပါဘဲ, လိုခငျြနေရာတိုင်းမှာဗီဒီယိုကို Cassette နှင့်မဂ္ဂဇင်းများ၏အဟောင်း porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မတူဘဲ, ငါတို့ကရယူနိုင်အောင်, စမတ်ဖုန်းရန်, နောက်ဆုံးတော့ desktop ပေါ်မှာကနေ laptop ကိုရန်နှင့်: porn ရွှေ့ပြောင်း။ လူတစ်ဦး Pornhub ရဲ့မကြာသေးခင်ကနှစ်ပတ်လည်နေ့အပေါ် Twitter တွင်ဦးဇော်လင်းကအဖြစ်ယာယီသင့်ရဲ့ browsing history ကို disable လုပ်ဖို့ option ကိုရည်ညွှန်း "ဒါဟာရုပ်ဖျက်မုဒ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ငါ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးမယ့်" ။ "ဒါဟာငါ့အအင်တာနက်သမိုင်းမဖျက်ပစ်ခဲ့ပါသည်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင်," အခြားတင်ခဲ့သည်။
"ငါ porn အသက် 12 ခဲ့ watched ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထင်ပါတယ်" ဂျေမီ, ယခု 22 ပြန်ပြောပြသည်။ "ကျွန်မကလူကအပြည့်အဝ hard drive တွေနှင့်အတူ [ကျောင်းကို] ကြွလာတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPod ထဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပတ်လည်ကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ ဒါလွယ်ကူသောခဲ့ - အရေးမယူဖြည့်စွက်။ အဘယ်သူမျှမဖမ်းမိရသွားခဲ့ပါတယ်။ "
ဂျေမီသည်သူ၏ငယ်ရွယ်သောအသက်တာ၌ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ကျေးဇူးတင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူကရိုးရိုးသည်နှင့်အဘယ်သူမျှမပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လိင်တူချစ်သူရွယ်တူချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတစ်ဦးဧရိယာ၌ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ "Porn ငါအပေါ် log နှင့်စက္ကန့်ကိုငါကြိုက်တယ်ဟာပစ္စည်းပစ္စယလည်းလူရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်ကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိခဲ့ကွောငျးကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းကိုဆိုလို" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကယ်ဆယ်ရေးခဲ့ပါတယ်။ "
သူဟာသော်လည်း, ကလည်း "ထိတ်လန်" ပစ္စည်းပစ္စယထိတွေ့ခံရခြင်းကိုဆိုလိုကပြောပါတယ်။ "ငါသည်လူတိုင်းမဖြောင့်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာမကြာခဏဖှယျဖြစ်ခဲ့သည်။ ရန်လိုလွှမ်းမိုးမှုကိုရန် - နှင့်အမှန်ပင်ကတခြားယောက်ျား - ဒါအများကြီး porn အမျိုးသမီးတွေအောက်ယောက်ျား၏မြင်ကွင်းများသရုပ်ဖော်သည်။ ကျနော်တို့ကဝေဖန်ဖို့တပ်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်, ထိုအသက်အရွယ်မှာကျွန်တော်မှဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ "
သူကအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်အပေါ်သွားသောအခါဂျေမီဆဲကညာခဲ့သညျ။ "ကျွန်မရောက်ရှိသည့်အခါကဖြစ်နှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ခဲ့သောအရာကိုလေ့လာသင်ယူရန်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူကြာ ယူ. ," ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါကျောင်းဝင်းအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသားစားရောက်ရှိလာခဲ့, ဒါမှမဟုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာကိုမဆိုပြုမဆိုလိုဘူး။ ငါ porn လိင်တူဆက်ဆံခြင်း OK ကိုခဲ့ပါတယ်ပြသပေမယ့်, တကအထူးသဖြင့်ကျန်းကျန်းမာမာသို့မဟုတ်ရက်ရက်ရောရောလမ်းအတွက်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဘယ်လောက်ငါ့ကိုမပြခဲ့ဘူး, ဆိုလို။ ဒါဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ကျိန်ဆဲခဲ့ပါတယ်။ "
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်အွန်လိုင်းအသက်လာသကဲ့သို့, ခေတ်ရေစီးကြောင်း porn တစ်ပြိုင်နက်ပိုပြီးဂရပ်ဖစ်နှင့်အာဏာနှင့်အတူအစွဲအလမ်းဖြစ်လာဖို့သလိုပဲ။ 2014 အတွက်လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုအဘို့, သုတေသီများအွန်လိုင်းလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုများရာပေါင်းများစွာဆန်းစစ်နှင့်ရုပ်ရှင်၏ 40% အတွက်, အမျိုးသမီးများ "ကိုယ်ထိလက်ရောက်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ" ကြံ့ကြံ့ခံတွေ့ရှိခဲ့ - spanking နှင့်မွန်းကျပ်ပါးရိုက်အပါအဝင် - "coercive လိင်" နေစဉ် မြင်ကွင်းများ၏တဦးတည်း-ဒသမအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
စာရေးသူအမြိုးသမီးမြား "အကြမ်းဖက်မှုမှအဆိုးကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး" သူ "လူရဲ့အပျြောအပါးအတှကျတူရိယာ" အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ကြစဉ်ယောက်ျား, အမျက်ထွက်လိင်စက်တွေအဖြစ် dehumanised ခဲ့ပြီးသောအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလွှမ်းမိုးမှုကိုကြောင့်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခဲ့သက်သက်သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ "ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးသင်ခန်းစာသင်ကြားသည်။ " "ကလေးထိန်းလိင်သို့ blackmailed ဖြစ်ပါတယ်။ " "အဖေ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုသမီး၏အဆွေခင်ပွန်းသင်ပေးတယ်။ " Professional က, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်မျိုးဆက်ညီမျှမှုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ DNA ကိုသို့ encoded ခဲ့ကြသည်။
ငါသည်အဘယ်သူ၏ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသူတို့ကိုချည်နှောင်သူတို့ကိုရိုက်မှမိန်းကလေးငယ်များကိုတောင်းဆိုနေတာကပါဝင်ပတ်သက် 18 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ
ကျောင်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားသူဖြစ်လာမတိုင်မီတင်ခဲ့သည်အဆိုပါအိမ်အပြန်မှာ '' မဂ္ဂဇင်းတည်းဖြတ်တဲ့သူမာတင် Daubney, ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်နေမကောင်း-တပ်ဆင်ထားအဖြစ်မှန်ကနေသီးခြားစိတ်ကူးယဉ်ဖို့နေသောဆယ်ကျော်သက်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ "ငါသည်အဘယ်သူ၏ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကကုလားထိုင်မှသူတို့ကိုချည်နှောင်သူတို့ကိုရိုက်မှမိန်းကလေးငယ်များကိုတောင်းဆိုနေတာကပါဝင်ပတ်သက် 18 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီ" ဟုသူကငါ့ကိုပြောပြတယ်။ သူကမိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်းစား porn ကြယ်များကိုဖျော်ဖြေပွဲအတုယူနှင့်မိန်းကလေးငယ်များ, ထိုးဖောက်မနှစ်မြို့ဖွယ်သို့မဟုတ် traumatising ကိုရှာဖွေပြုမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့ပြောကြားသိခဲ့ပါသည်။ "ငါသည်သူတို့မည်သူမဆိုနမ်းဖူးပါဘူးလို့ပြောပေမယ့်ကျိန်းသေစအိုလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားရန်လိုခငျြတဲ့သူယောက်ျားလေးများအားမိန့်ပါတယ်။ "
“ အင်တာနက်မတိုင်မီမှာအသက် ၅၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Daubney က“ မင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာဖို့အချိန်ယူရတယ်။ အခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာသိပ်မကြာခင်နှစ်တွေအတွင်းမှာကျုံ့သွားတယ်။ ”
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာရောက်ရှိသောအခါ - - ရလဒ်များစွာကိုလူငယ်များ, အစစ်အမှန်လိင်အဘို့, သောကွောငျ့ဖွစျသညျကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်ထက်ဝေးလျော့နည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အခြေအနေများ၏ဖြစ်ပွားမှုအပေါ်စာရင်းဇယားများကထွက်ဘွားမြင်ဖြစ်ပါတယ် - တစ်ချိန်ကလူအိုရဲ့ရောဂါဆင်ခြင်၏။ ဥရောပမှာတော့ 18 မှ 40 အသက်လူတို့တွင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းက 40% သလောက်အထိလွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု 80 အဲဒီအသက် 28 အကြားခဲ့နှုန်းစံချိန်သိရသည်။
Angela ဂရက်ဂိုရီ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာ psychosexual ကုထုံး, မကြာသေးမီကသူမလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကျော် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်ကုသထားပြီးငယ်ရွယ်အထီးလူနာအရေအတွက်ကမြင့်တက်ခဲ့သည်သတိပေးခဲ့သည်။ "ဒီလူပျိုတို့ကိုအော်ဂဲနစ်ရောဂါမရှိကြပါဘူး။ သူတို့ဟာပြီးသားသူတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်အားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာနဲ့အရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကဆိုသည်။
ရိုးရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်မရှုမြင်သောမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက်အပြာရုပ်ပုံသည်ပိုမိုအစွန်းရောက်လာခြင်း၊ ပါဝါကိုပိုမိုစွဲလန်းခြင်း၊ ပိုမိုဂရပ်ဖစ်ဆန်ခြင်းများဖြစ်လာသလား။ အမျိုးသမီးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ Kat Banyard က၎င်းကိုယုံကြည်သည်။ သူမ၏ ၂၀၁၆ စာအုပ်ဖြစ်သော Pimp State: Sex, Money and the Equality of the Equality ၏အနာဂတ်၌ -“ ညစ်ညမ်းသောအမြတ်ထုတ်သူများသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလူအုပ်ကြီးရှေ့တံတောင်ဆစ်ဖြင့်တွန်းထုတ်ပြီးပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ ”
တစ်ဦးပြည့်စျေးကွက်၏ဆူညံသံမှတဆင့်ဖြတ် desensitised အသုံးပြုသူများအယူခံရန်, Banyard ထုတ်လုပ်သူများ ပို. ပို. လွန်ကဲသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရမယ်, စောဒကတက်သည်။
ငါ Corey စျေး, Pornhub ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုဝတ်သောအခါသူစက်မှုလုပ်ငန်းမျှသာစျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းစောဒကတက်: "ဒါဟာမဆိုဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတူညီပါတယ်။ သငျသညျထွက်မတ်တပ်ရပ်များနှင့်အမှန်တကယ်လူတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုလျှင်, သင်ကလူချင်သောမူရင်းနှင့်ဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်ရှိသည်။ "
သူက porn ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုသူများအများ၏နောက်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးထင်ဟပ်, ဒါမှမဟုတ် porn ထိတွေ့သူတို့ကို desensitises နှင့်အစဉ်အဆက်ကပိုလွန်ကဲပစ္စည်းတစ်ခုစာစားချင်စိတ်ကိုဖန်တီးသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လျှင်ထိုသူကိုငါမေးပါ။ သူဟာလိင်စိတ်ပညာရှင်များအတွက်ရဲ့သို့မဟုတ်ဒဿနပညာရှင်စဉ်းစားရန်သူကပြောပါတယ်။
"ဒီကလူလုပ်နေတာကဘာလဲ, ငါတို့ဘာကြောင့်မှနျးမှအခြားသူများအားစွန့်ခွာလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ရုံအချက်အလက်များနှင့်ဒေတာများသိပ္ပံနှင့် algorithms ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကိုမကယ်မလွှတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ် YouTube ကိုဖြစ်ပါတယ် "ဟုစျေးကပြောပါတယ်။
ဒါဟာသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းစွာလူတွေလိုချင်တာတွေအပေါ်စီရင်ဖို့နေရာချနေကြသည်ဟုပြောသည်ရပါမည်; အတိတ် 10 နှစ်အတွင်း, Pornhub ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးလေးစားဖွယ်ဒေတာ-သိပ္ပံအသင်းများ၏တဦးတည်းစုဆောင်းခဲ့သည်။ "တစ်ဦးကတစ်ဦးကိုနျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်ခဲ့သည်တဦးတည်းကို Microsoft ကနေရောက်လာသည်ကား, အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်," စျေးကပြောပါတယ်။ "သင်သည်ညစ်ညမ်းရဲ့, ဒါပေမယ့်ထိုသူတို့အဘို့ပြုလုပ်မယ့်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ "
သူတို့အလုပ်သူတို့အစဉ်အဆက်လူသိများလူ့လိင်အပေါ်အကြီးမားဆုံးဒေတာအစုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်တစ်ထောင်: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကသူတို့အကျိုးအမြတ်အများဆုံးလူဦးရေအပေါ်တစ်ဦးပြည့်စုံအစီရင်ခံစာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယျအအွန်လိုင်း porn နှင့်အတူကြီးပြင်းခဲ့ကြရန်အတွက်ပထမမျိုးဆက်ခွဲခြား?
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် "သူတို့ပုံနှစ်အတွင်းဝဘ်ဖွငျ့ဤအုပ်စုရရှိသတင်းအချက်အလက်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာလက်လှမ်း" အဲဒီရှင်းပြခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်သူတို့အွန်လိုင်း porn လောင်လမျး၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်ယခင်အစဉ်အဆက်ကနေအနှစ်တစ်ထောင်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သူတို့ကပိုမကြာခဏအခြားမည်သည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုထက်ကစောင့်ကြည့်ကွဲပြားခြားနားသော Device များ (စမတ်ဖုန်းထက်ကွန်ပျူတာများ) ကိုသုံး, ကွဲပြားခြားနားသောနာရီမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှု (11am မှ 12pm အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များအမြိုးမြိုးကိုရှာ။
အနှစ်တစ်ထောင်မဲဆန္ဒရှင်အများစုဥရောပတိုက်တွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်ပိုမိုနှစ်သက်ကြပေမည်, သို့သော်ညစ်ညမ်းမှကြွလာသောအခါဗြိတိန် twentysomethings အိမ်သို့ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှု: "ဗြိတိန်" သူတို့အများဆုံးကြည့်ရှုသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ "ဆယ်ကျော်သက်", "မိခင်တွေလည်း", "threesomes" နှင့် "ကလေးထိန်း" ကိုရည်မှတ် scenarios ဤအတောအတွင်းသူတို့၏ဗွေဆော်စိတ်ကူးယဉ်အကြားရှိပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး, ကျန်းမာရေး-အစွဲအလမ်းနှစ်တစ်ထောင် - သူတို့ရဲ့စင်ကြယ်သောစား fads လူသိများ - အများကြီးပိုသူ၏ရှာဖွေမှုများကို "ဆေးလိပ်သောက်" porn များအတွက် 51% ပိုမိုဘုံခဲ့ကြသည်အဟောင်းသားစဉ်မြေးဆက်, ထက် "အားကစားရုံ" နှင့် "ယောဂ" porn စောင့်ကြည့်ဖို့များပါတယ်။
Pornhub ၏စျေးနှုန်းသည်မိမိ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုကြသည်သောလွန်ကျူးခြင်းသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါထူးထူးဆန်းဆန်းရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများအကြောင်းကို Non-စျကွောစီရငျဖြစ်ပါတယ်။ "လူတွေကမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အဘို့ရှာကြသည်, သူတို့ကအစစ်အမှန်အသက်တာ၌မတည်ရှိပါဘူးအရာတွေ့ကြုံခံစားချင်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းဒီမျက်နှာစာပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့အတွေးအခေါ်ရှင် bedfellows ရှိပါတယ်။ Isabel, 25 တစ်သတင်းစာဆရာနှင့်အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားသူ says: "ငါသည်မည်သည့်သူချင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုငြင်းပယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိုချင်တာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့, လက်ျာလူဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ဒါကလိင် policing တူနေတယ်။ "
သူမသည်ယျ: "ငါနည်းနည်းတက် roughed ခံရစိတ်ထဲမထားပါဘူး, ငါ၏အသက်တာ၏ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားဒေသတွေမှာ၏ထိန်းချုပ်တယ်, မကျွန်မအတော်လေးပြင်းထန်တဲ့ porn ကိုကြည့်စိတ်ထဲပါဘူး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကကြည်ကြည်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အထက်တွင်အဖြစ်ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်စေ likes အဘယ်အရာကိုကြိုးစားနေစိတ်ထဲမထားပါဘူး။
"ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်လွန်း porn စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်သည့်အခါပြောပြရန်လည်းအလွန်လွယ်ကူသည်။ သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခါယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမှန်ကန်အသက်နှင့်ညစ်ညမ်းအကြားခွဲခြားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမထားပါဘူး။ နှင့်လူမှုရေးအရသို့မဟုတ်လိင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာများအတွက် template ကိုအဖြစ် porn ကိုတွေ့မြင် - လူများအိပ်ခန်းသို့ဆောင်ခဲ့မည်သည့်အခါအဆိုပါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူအဖြစ်, ငါရှိခြင်းစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်စကားဝိုင်းမှဖွင့် - porn သူ့ဟာသူအဆုံးသတ်မဟုတ် "။
ငါသည်ဤဆောင်းပါးအဘို့အားမိန့်တော်မူမည်သူမျှအဖြေကိုညစ်ညမ်းပိတ်ပင်ရန်သို့မဟုတ်ဆင်ဆာခဲ့ကြောင်းယုံကြည်သည်။ Pornhub ရဲ့ဒေတာကိုအနှစ်တစ်ထောင်အချိန်မရွေးမကြာမီကိုယ်ကျင့်တရားအမျက်များတွင်ချွတ် log သွားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်။ porn အခြေခံသူတို့ဖော်ပြဘယ်လိုရှုထောင့်နှင့်အတွေ့အကြုံလိင်ဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းအင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ညစ်ညမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေပိုကောင်း, ပိုဆန်းသစ်အကြောင်းအရာများကိုရိုးရိုးဟုထင်၏။ Cindy ကဆုန်ပေါက်ပြေး MakeLoveNotPorn, လိင်ဆက်ဆံအစစ်အမှန်ဆက်ဆံရေးအတွက်စုံတွဲများတပ်ဆင်ထားကြောင်း website တစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
"Porn စာပေသို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်ကဲ့သို့အပြတ်အသတ်အမြိုးမြိုးနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူမကကျွန်မကိုပြောပြတယ်။ "ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်ရဲ့နှင့်လူကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့သင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးထုတ်ဝေသူအနေနှင့်သင်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်စာအုပ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျအဘယျသို့လုပျရမလဲ? ပိုကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေ Publish ။ "